Dowlada Soomaaliya oo isku dayeesa in aay joojiso shirka maamul goboledyada oo ka dhacaya magaalada Kismaayo – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDowlada Soomaaliya oo isku dayeesa in aay joojiso shirka maamul goboledyada oo ka dhacaya magaalada Kismaayo
Dowlada Soomaaliya oo isku dayeesa in aay joojiso shirka maamul goboledyada oo ka dhacaya magaalada Kismaayo
Hiiraan Xog, Sep 30, 2017:- Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal uga jirta sidii ay u baajin laheyd shirka lagu wado in ay joojiso shirka ay yeelanayaan maamul goboledyada dalka oo la filayo in uu ka dhaco magaalada Kismaayo.
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heshay Warbahiinta qaar ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo Mas’uuliyiin kale ay saacadihii la soo dhaafay kulamo gaar ah ka yeesheen xaalada siyaasadeed ee dalka, Khilaafka maamulka Galmudug iyo shirka maamul goboleedyada ee dhowaan magaalada Kismaayo ka dhici doona.
Shirka Kismaayo ayaa loo arkaa mid caqabad ku noqon kara nidaamka Federaalka, hadii shanta Madaxweyne goboleed ay si gaar ah kulan ka dhan ah dowladda Soomaaliya yeeshaan, kaasoo noqon doona kulankii u horeeyay ee ay dowladda dhexe ka maqan tahay, hadii Maamul goboleedyada uu isbaheysi dhex maro uu saameyn ku yeelan karo.
Shakiga kale ee dowladdu ka qabto shirkaas ayaa ah in loo arko in dowladda Federaalka aanay xilligan gacanta ugu jirin jaan-goynta arrimaha siyaasada gudaha, isla markaana ay keeni karto khal-khal siyaasadeed oo uu dalku galo.
Waxaa kaloo shirka Kismaayo u aragtaa mid awood siin kara Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo uu xaalka ku xun yahay, kaasoo dhowaan taageero ka helay qaar ka mid ah Madaxda maamul goboleeydada dalka.
Wararka ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay dooneyso in shirka Kismaayo la hakiyo, iyadoo u mareyso dhinacyo kala duwan, sida dowladaha deriska ee sida dhow xiriirka ula leh maamulada dalka, waxaana lagu wadaa in dowladdu ku baaqdo shir guud oo bisha soo socota ee October dhici doona.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maalmo ka hor sheegay in gogol uu Kismaayo ugu fidinayo Maamul goboleedyada, si looga tashanayo xaaladaha siyaasadeed ee dalka, isla markaana wixii ay ka soo tashadaan ay dowladda Dhexe ula tagi doonaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilligan wajaheysa caqabado siyaasadeed oo gudaha ah, kaddib markii qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay ka hor yimaadeen go’aanada qaar ee dowladda ka gaartay arrimaha siyaasada, gaar ahaan go’aankii Khilaafka Khaliijka oo noqday mid saameyn ku yeeshay siyaasada arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo ka hadlay Xildhibaanada yimid magaalada Cadaado
DAAWO SAWIRO:- Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo xariga ka jaray Saldhiga ciidamada dalka Turkiga